Amathiphu namasu angama-AirPod angama-21 Okufanele Ukwazi - Izesekeli
I-Apple yethule i-AirPods Pro ekupheleni kuka-Okthoba 2019, kwathi kungakapheli unyaka yathola ukuthandwa kakhulu futhi yaba isitatimende senkambiso. Kuhlanganiswe nokusebenza kahle, izici, nesitayela i-AirPods Pro yaba yinani lemali ngaphakathi kwe- $ 250 esitolo se-Apple kanye ne- $ 200 kwezinye izimakethe. Sikulethela ezinye zezeluleko namasu we-AirPods amahle kakhulu ukuze uqiniseke ukuthi awuphuthelwa noma yiziphi izici zedivayisi.
Nazi ezinye zezici ezinhle kakhulu ze-AirPods nokuthi yini abangayenza:
Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo ngomsindo ogwilizayo
Ukunikezwa okufanelekile okwenziwe ngokwezifiso okuphelele
Impilo yebhethri ekunika amahora ama-4.5 okulalela ngehora elilodwa nje lokushaja kanye nehora eli-1 lokulalela kungakapheli imizuzu emihlanu nje kuphela, yebo uzwile (wafunda) kahle!
Nezinye izindlela zokududuza.
Kepha la maqhinga nezici ze-AirPods Pro kwenzelwa umuntu ojwayelekile, uma ulapha ufunda i-athikili yethu, ufanele ukwazi okuningi.Manje, ake singene futhi sithole ukuthi yini enye i-AirPods Pro yakho engayenza.
Imihlahlandlela eminingi ye-AirPods:
Amathiphu namaqhinga ama-AirPods angama-21 - Kumele Uhlole
1. Isici 'Spatial Audio'
I-AirPods Pro inesici esisebenza kakhulu nesidumile, esibizwa nge- 'spatial audio'. Lesi sici sisebenza uma ubuka ividiyo noma i-movie ku-apple tv yakho noma olunye uhlelo lokusebenza, futhi lapho uzofaka khona i-AirPods Pro yakho, izwi lizohamba lizungeze ezindlebeni zakho ngokuya ngesimo sevidiyo noma indlela ohambisa ngayo ingene ngaphakathi futhi uzozwa sengathi izwi ligijima kude kude nezindlebe zakho.
Kunjengokucabanga kuka-Apple, ake silethe umlingo we-3D nakwe-movie yakho ye-2D. Umsebenzi omuhle Apple!Ukuzwa umlingo walesi sici, udinga ukuthi i-iOS 14 ibuyekezwe ku-iPhone yakho. Ukuze uyinike amandla, vula imenyu Yezilungiselelo ku-iPhone yakho> chofoza inketho ye-Bluetooth> thepha isithonjana esithi “i” esiseduze ne-AirPods Pro yakho> slayida iswishi eceleni kwe-‘spatial audio ’.
2.Imodi Yokususa Umsindo
Uke uhlale e-cafe noma ehhovisi lakho uzame ukusebenza kanzima kepha i-buzz traffic noma izinhlebo ezingenamkhawulo ezivela eqenjini eliseduze kwakho zilokhu zithululela ezindlebeni zakho futhi isifiso sakho kuphela ukuthulisa imilomo yabo.I-Apple ikuzwile futhi yafaka imodi yokukhansela umsindo ku-AirPods Pro yakho uqobo.
Okufanele ukwenze nje ukucindezela isikhathi eside ku-AirPod noma uswayiphele ngakwesokudla esikhungweni sokulawula kudivayisi yakho> cindezela isikhathi eside inkinobho yevolumu> kuzovela izinketho ezintathu zezindlela ezitholakala ku-AirPods Pro> khetha inketho yokukhansela umsindo ukusuka lapho.
Ubukuphi kuze kube manje i-Apple?
3. Imodi yokubonisa ngale
Imodi yokukhanselwa komsindo iphelele nje, ngiyavuma, kepha kuthiwani uma kukhona lapho uthanda khona ukulalela izingoma / ama-podcast / izingcingo zakho kepha usadinga ukubheka (indlebe) kumaphimbo angemuva, njengalapho uku indiza noma ukuhamba emgwaqweni.
I-AirPods Pro yakho ikumbozile nalapha. Mane ucindezele i-AirPod isikhathi eside noma uswayiphele kwesokudla esikhungweni sokulawula kudivayisi yakho> cindezela isikhathi eside inkinobho yevolumu> izinketho ezintathu zamamodi atholakalayo ku-AirPods Pro yakho zizovela> khetha imodi ye-Transparency kusuka lapho.
4. Lawula umculo wakho kusuka kusiqu se-AirPod uqobo
Zonke ezinye izinhlobo zama-earbuds noma ama-headphone anezinkinobho ezithile esiqwini noma esisekelweni sokudlala noma sokumisa kancane umculo wakho, njll. Kepha i-AirPods Pro yakho ithanda kakhulu kunalokho.I-AirPods Pro ayinazo izinkinobho kunalokho inomuzwa wokuthinta / wokucindezela owakhiwe esiqwini. Umane ucindezele noma ucindezele ukuhlehla okuyisicaba ku-AirPod ngayinye futhi uzozwa ngokuchofoza kumshini ngamunye.
Nakhu okushiwo umshini ngamunye
Umshini owodwa- misa isikhashana / udlale umculo
Cindezela kabili- yeqa uye phambili
Cindezela kathathu- weqa emuva
Cindezela isikhathi eside- Shintsha phakathi kweNoise Cancellation neTransparency Mode (lezo esisanda kukhuluma ngazo ngenhla)
Sisanda kukhuluma ngalokho okushiwo umshini ngamunye kusiqu se-AirPod yakho, ake sikutshele ukuthi ungayenza kanjani ngokwezifiso ngaphezulu.Shintsha ijubane elidingekayo ukuze umshini usebenze ngamasethingi akho. Vula izilungiselelo efonini yakho> chofoza ukufinyeleleka> khetha ama-AirPods> manje lungisa isivinini nobude besikhathi.
5. Isici sokulalela bukhoma
Yini engamangalisa ngaphezu kwe-Apple evumela isici ukukusiza ulalele. Kulungile, hhayi ngokusemthethweni kepha ungakusebenzisa lokho futhi.Ngakho-ke yilokhu okwenziwa isici se-Live Listen. Uma inikwe amandla i-iPhone / idivayisi yakho isebenza njengemakrofoni futhi yonke into ekhulunywa eduze kwayo ingazwakala ku-AirPods Pro yakho. Kulungile, akunjalo?
Ukuyivula, iya kuzilungiselelo zakho ze-iPhone> chofoza esikhungweni sokulawula> khetha izilawuli ngokwezifiso> thepha uphawu '+' eceleni kosizo lokuzwa ukulifaka esikhungweni sakho sokulawula. Manje faka ama-AirPod akho> vula indawo yokulawula> chofoza isithonjana sokuzwa> ewindini lokuzwa, thepha okufakwayo ukuze ulalele bukhoma> beka ifoni yakho eduze komuntu ofuna ukumuzwa.
Futhi manje usungawezwa amazwi atholwe evela kumakrofoni ye-iPhone yakho, konke ku-AirPods Pro yakho uqobo.
6. Isici sokuhlala kwehedfoni ku-iOS 14
Isici sokuhlala kwehedfoni sikusiza ukuthi ukhulise imisindo ethambile futhi uguqule amaza athile ngokuya ngezidingo zakho zokuzwa nokunethezeka ukwenza i-AirPods Pro yakho ibe ngeyakho uqobo.
Iya kuzilungiselelo> chofoza ukufinyeleleka> khetha umsindo / okubukwayo> khetha indawo yokuhlala ngehedfoni, ukuvula isici.
7. Shintsha eyodwa kuphela yama-AirPod kumakrofoni
Ngokuzenzakalelayo, womabili ama-AirPod akho anemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi ekusiza ekunikezeni imiyalo kuSiri noma ukukhuluma ngocingo.Kepha ake sithi ufuna eyodwa kuphela ye-AirPod yakho ukuthi isebenze njengombhobho, wazi ukugxila ohlangothini olulodwa kuphela lapho ukhuluma noma nganoma yisiphi esinye sezizathu zakho, lapho-ke ungakwenza lokho ngokulandela izinyathelo ezinikeziwe.
Vula amasethingi efoni> khetha i-bluetooth> chofoza kusithonjana semininingwane ye-AirPods> khetha imakrofoni> shintsha okuzenzakalelayo.
Ufuna ukwazi ukuthi ubani oshayayo ngaphandle kokuthinta ifoni?
Ingabe uyagula ngokumisa imoto eceleni, kaninginingi, ukubheka ukuthi ngubani ofonayo, ucabanga ukuthi kungabaluleka futhi ngaso sonke isikhathi lapho kuvela ukuthi kuwucingo logaxekile?
Khululeka, sikubambile.Vula izilungiselelo zefoni> khetha ifoni> manje ngaphansi kwesihloko sezingcingo> thepha ukumemezela izingcingo> khetha amahedfoni kuphela.
8. Ukwenza kusebenze iSiri ngama-AirPods
Ukubuza imibuzo kuSiri manje sekulula kakhulu ngoba manje usungasebenzisa iSiri kuma-AirPod akho uqobo.Vele uthi “Hey Siri” noma biza uSiri nge-AirPods Pro yakho ngokucindezela nokubamba inzwa ye-Force kunoma yisiphi isiqu se-AirPod Pro.
9. Guqula phakathi kwamamodi nge-Apple Watch yakho
Khumbula ukuthi sikhulume kanjani ngokuthi zipholile kanjani izindlela ze-AirPods Pro yakho kumaphoyinti angenhla. Nayi iqhinga elihlobene nokufanayo.Manje usungaguqula phakathi kwemodi ye-'Noise Cancellation 'noma imodi ye-'Transparency' noma uyivale nakwi-Apple Watch yakho.Ngenkathi ulalele umsindo ngewashi lakho, thepha isithonjana se-AirPlay> thepha 'Ukukhanselwa komsindo', 'Ukubonisa ngale' noma 'ukuvala'.
10. Thatha Ukuhlolwa Kwe-Ear Tip Fit
Usuvele uyazi ukuthi i-AirPods Pro iza nesethi yamathiphu amathathu endlebe. Incane, iphakathi nendawo, futhi (khipha onqenqemeni lwethiphu lendlebe futhi uzothola igama likasayizi eliqoshwe ngaphakathi eduze kwesisekelo salo), ngenkathi umaphakathi usuvele unamathiselwe ku-AirPods Pro ungashintsha kalula amathiphu endlebe ngokusho kwakho induduzo.
Uyazi ukushintsha ithiphu yendlebe, akunjalo? Kulula, vele ukhiphe ngokuqinile ithiphu yendlebe ku-AirPod futhi lapho ufuna ukuphinda unamathisele enye, vele uyiqondanise nesixhumi se-oval bese uyicindezela uze uyizwe ichofoza.Ake sithi awunaso isiqiniseko sokuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi ngabe lena yithiphu yendlebe elungile yezindlebe zakho, ungahlala uthatha i-Ear Tip Fit Test ye-AirPods Pro yakho.
Faka ama-AirPod akho> iya kuzilungiselelo zefoni> khetha i-Bluetooth kudivayisi yakho ye-iOS> thepha inkinobho “i” eseduze ne-AirPod Pro yakho kuhlu lwedivayisi> thepha i- “Ear Fit Tip Test” (uma ungaboni i- “ I-Ear Fit Tip Test ”kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi unezinguqulo ngaphambi kwe-iOS 13)> thepha ku-continue> thepha inkinobho yokudlala.
Amathuba ukuthi womabili ama-AirPod akho angahle afane nosayizi ohlukile. Injalo-ke imizimba yabantu.
11. Hlola ibhethri le-AirPod kusuka ku-iPhone yakho
Ungahlala unake izinga lebhethri lama-AirPod akho ukuze ungaphelelwa yibhethri phakathi kwemizwa yakho yomculo.Faka i-AirPods Pro yakho ecaleni lokushaja bese uvula icala eduze kwensimbi. Ukugqwayiza okukhombisa amaphesenti ebhethri kuzovela.Noma ungahlala ubuza uSiri ngezinga lebhethri lama-AirPod akho.
12. Shintsha imodi kusuka kudivayisi ye-Mac
I-Airpods Pro ikuvumela ukuthi ushintshe imodi yakho kalula kusuka kudivayisi ye-Mac futhi. Isimo ukuthi i-laptop yakho kufanele ivuselelwe ku-MacOS Big Sur.Uma usulungele ukuvuselelwa, chofoza kusithonjana se-AirPod> khetha izindlela zokushintsha.
Noma chofoza inkinobho yokulawula ivolumu (etholakala kubha yemenyu)> sesha i-AirPods Pro yakho kumenyu yokudonsela phansi> manje usungaguqula kalula phakathi kwamamodi (imodi yokukhansela umsindo, imodi yokubonisa okusobala, nemodi evaliwe).
13. Gcina impilo yebhethri ye-AirPod Pro yakho
Ngiyazi ngawo wonke amathiphu namasu esiwakhulume ngenhla futhi sizokhuluma ngezansi, kunento eyodwa oyidinga ngempela ithiphu - impilo yebhethri.Yize i-Apple iqinisekisa impilo yebhethri eqinile, lapho kuwusuku olumatasa futhi ungenasikhathi sokukhokhisa kepha udinga ama-AirPod akho usuku lonke, izinto zizocasula uma ama-AirPod efa phakathi.
Sizwe ngawe! Uma ungeyena umuntu odinga njalo ama-AirPods ngasikhathi sinye ungavele usebenzise i-AirPod eyodwa ngasikhathi bese uvumela enye iphumule futhi igcine inkokhelo yayo.Uqedile ngeyokuqala, nonke nenziwe isipele. Akusona isimo sokuwina? Usebenzisa ama-AirPods kabili impilo yawo yebhethri ngokushaja okukodwa.
14. Vumela ama-AirPod ukuthi akufundele umyalezo wakho
Uma ama-AirPod engakwazi ukukuhlohla kuwo wonke umyalezo omusha kungani ungavumeli ukuthi uwufundele nawe, bese unquma ukuthi kufanele yini ukuphula ingqondo yakho bese uphendula.Ukwenza ama-AirPod akho akwenze chofoza izilungiselelo kufoni yakho> Siri & search> memezela imiyalezo. Ungakhetha nokuthi imiphi imilayezo ongafunda kuyo. Ngokuqondene manje, izinketho yilezi - Izintandokazi, Okwakamuva, Oxhumana nabo, noma Wonke umuntu.
Futhi uma uphendula umyalezo ngoSiri, ama-AirPods azophinda afunde noma yini oyitshele yona ukuthi iphendule. Futhi uma ucasulwa yileli qiniso ungashintsha lesi silungiselelo futhi ngokuya kuzilungiselelo zefoni> chofoza kuzaziso> khetha ukumemezela imilayezo> manje chofoza inketho ethi 'phendula ngaphandle kokuqinisekisa'.
15. Ungaxhuma ama-AirPod akho nasocingweni lwakho lwe-android
Ama-iDevices akuwona kuphela amadivayisi ahambisanayo ne-AirPods Pro yakho. Ungawaxhuma nakumadivayisi wakho we-android. Icebo eliphelele labasebenzisi be-android!
Ngokubhangqa i-AirPods Pro yakho, vula amasethingi efoni> chofoza ukubhangqa idivaysi entsha> vula i-AirPod Pro yakho ukubhangqa> chofoza ku-'qinisekisa ukubhanqa '.
Uma kwenzeka ama-AirPod engabonakali kuhlu lwamadivayisi atholakalayo, cindezela bese ubamba inkinobho ekhona ngemuva kwecala kuze kukhanye ukukhanya kwe-LED. Manje, lokhu bekuzobeka ama-AirPod akho kumodi yokumatanisa ukuze ukwazi ukubhangqa kalula manje.
16. Isibani se-LED ngaphambili kwecala
Uma kwenzeka wake wazibuza ukuthi lokho kukhanya okuncane kwe-LED ngaphambili kwecala lokushaja kusho ukuthini - kwesinye isikhathi kumhlophe, kwesinye isikhathi kunombala, ungakwazi ukusuka lapha.
Lapho kungekho ukukhanya- ibhethri likhishwe lonke
Ukukhanya kwe-Amber lapho ama-AirPod ekuyo- Ama-AirPod ayashaja
Ukukhanya kwe-Amber lapho ama-AirPod engekho kuwo- ikesi lokushaja linezinga lebhethri elingaphansi kokugcwele
Ukukhanya okuluhlaza ngaphandle kwama-Airpod kuwo- icala lokushaja linamacala angaphezu kwe-1 asele
Isibani esimhlophe esikhanyayo- ama-AirPod asethwe kabusha
Isibani esikhanyayo se-Amber- Ama-AirPod anephutha elingaba khona futhi adinga ukusethwa kabusha.
Lapho i-AirPods Pro isesimweni ilambu le-LED likhombisa isimo sokushaja sama-AirPod futhi uma kungenjalo, ilambu le-LED kuleli cala likhombisa isimo secala lecala lokushaja.Ungakhumbula lokhu. Siyakwethemba.
17. Enza ngendlela oyifisayo igama le-AirPods Pro yakho
Uthole zonke lezi zeluleko zokwenza i-AirPods Pro yakho ibe ngeyakho, ngakho konke ukwenza ngokwezifiso, induduzo, ukusetha obekudinga.Kepha into eyodwa isala, igama kunjalo. Kungani ungashintshi igama le-AirPods Pro yakho bese ulenza libe elakho ngokuphelele.Iya kusigaba sokusetha se-iPhone yakho> chofoza ku-Bluetooth> thepha isithonjana semininingwane ye-AirPods lapho> manje buyekeza igama.
Yebo, kulula kanjalo.Manje usungabona kalula ukuthi ngabe i-AirPods Pro yakho iyona ebhangqiwe noma eyomunye umuntu. Noma ungabona isethi yakho lapho kunamasethi amabili ama-AirPod axhunywe efonini yakho.Yisho manje noma yini oyifunayo. Bona ukuthi ungaphola kanjani nawe.
18. Landelela ama-AirPods Pro
Ngabe usitshela ukuthi nawe uyagula ngokulahlekelwa ama-AirPod akho ngaso sonke isikhathi bese nawe kufanele ulandele yonke indlela ebuya endleleni yakho ovela kuyo ubulale elinye ihora kulobu buwula?I-Apple isivele ikuxazululele le nkinga futhi sizokutshela ukuthi kanjani.
Ungavele ulandelele ama-AirPod akho nge-iPad / iPhone yakho. Vele uvule uhlelo lokusebenza lwe- 'Thola wami' ku-iPhone / iPad yakho> ngena ngemvume nge-akhawunti yakho ye-Apple> faka i-AirPods Pro yakho>. Imephu izokhomba indawo ebukhoma ye-AirPods Pro yakho noma uma ama-AirPod elahlekile ngesikhathi engangenanga ngemvume kuzobonisa iphuzu lokugcina lapho beku-inthanethi.
19. Ukwabelana ngomsindo phakathi kwamaqoqo amabili ama-AirPods ngedivayisi eyodwa
Khumbula indlela yakudala yesikole ngenkathi uzwa ingoma efakwe ama-earphone futhi wabelana ngozakwethu kanye nomlingani wakho futhi nobabili ningena engomeni ndawonye.Yinguqulo yesimanje efanayo. Sisho nje ngokwabelana ngama-AirPod hhayi umqondo!
Manje konke okumele ukwenze ukuxhuma i-AirPods Pro yakho kwi-iPhone yakho noma kwenye idivayisi ye-iOS> thepha isithonjana se-AirPlay> chofoza inkinobho yokwabelana yomsindo> bese ubamba ama-AirPod omngane wakho uma kwenzeka isivalo sivuliwe eduze nedivayisi yakho.
Ngalezi zeluleko namaqhinga angama-21 e-AirPods Pro, sisanda kukutshela ngakho, ukuthenga kwakho ama- $ 250 kubonakala kuphephe kakhulu kuwe. Lawa ma-hacks ngeke akwenze ubukeke upholile kuphela, akunikeze umngcele ngaphezu kwabangane bakho be-tech-savvy kepha futhi azokwenza i-AirPods Pro yakho igcizelele izidingo zakho nezidingo zakho ikunikeze yonke induduzo nokusebenza kahle i-Apple ekuthembise khona kuwe Ukuthengwa kwe-AirPods Pro.